Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka July 10, 2015	0 331 Views
Muqdisho (Himilonews) – Waxaynu nool nahay qarniga 21aad oo mid iyo qof kasta uu xor u yahay inuu sameeyo wuxuu ka helo; u dhaqmo suu doono; u noolaado suu doorbidayo. Waxaynu ka hadalnaa xurnimo hayeeshe dhab ahaan, dhamaan dadku ma wada ahan xor. Adoonsigii waa la xabisay; wuxuuna ka noqday xaq-daro aduunka oo dhan, hase ahaatee, dadku wali waxay adoon u yihiin waxyaalo badan ogaal iyo ogaal la’aan. Mid adoonsiga ku jirta oo ah meel qofku uusan helin xurnimo ayaa dunida ku baahsan ilaa maanta. Tani ma ahan mid kale ee waa ka ganacsiga dadeed “Human Trafficking” oo dunida ka ah wax iska caadi ah.
Ka ganacsiga dadka—waxaa lagu qeexi karaa dhaqaale ka sameynta Bani’aadanka, ugu badnaan ujjeeddo la xiriirta adoonsi galmood “Sexual slavery,” sandulleyn shaqo “forced labour,” ama in lagala baxo xubnaha muhiimka u ah jirka qofka sida; beerka, minka, kilyaha i.w.m. Dad-ka-ganacsiga waxaa loo sameeyaa inay tahay meel si fudud looga sameyn karo lacago badan waqti yar gudihiis. Waa shaqo halis daran. Hayeeshe, dadka-gacanacsadayaasha waxay dhiseen xiriir adag oo dunida isugu furan taas oo ay ku adag tahay bilayska aduunka inay si fudud ula jaan-qaadaan wax-ka-ogaanshaha xiriiradooda. In dadka laga ganacsado waa fal Aadminimada ku xun. Waxay si fool xun uga hor imaanaysaa xaqa qofka Bani’aadanka ahi leeyahay.
Waa kuwan hadaba 10-ka dal ee ugu badan dad-ka-ganacsiga;
Bangaladesh—waa wadanka ugu horreeya marka ay timaado dad-ka-ganacsiga. Waa bu’da ugu weyn ee dunida isku xirta. Waa isha, maaxda iyo marinka loo maro dad-ka-ganacsiga. Caruurta, haweenka iyo raga guud ahaan ayaa lagu sandulleeyaa inay sameeyaan. Dhillaysi-qasab ah, sandulleyn shaqo, ku deeqid xubno si dirqin ah, ka iibsiga xubnaha sida ugxamaha dhedigta. Dad badan oo Bangaladesh ah ayaa Hindiya la geeyaa dabadeedna dunida looga sii daabulaa!! Adkaanta nolosha, xaq-darro iyo saboolnimo ayaa sal u ah in dadku ay naftooda ka dul-ganacsadaan.
Previous: 10-ka Dal ee ugu sarreeya Qaxwada Dunida!!